Fatina sokadranomasina tao Manakara Tsy sahy nihinana ny olona
Tamin’ny zoma, tamin’ny 6 ora hariva no hita faty ny sokadranomasina milanja iray taonina.
Azon’ny harato ka navelan’ireo mpiandriaka fa tsy zakany. Mila “oxygène” anefa izy ireny ka izay no nahafaty azy ary nentin’ny onjan-dranomasin’i Manakara niafitra teny amorontsiraka. Ireo nahita izany tsy niteniteny fa nandrasa avy hatrany ary efa maro ny mponina nandrasa vao nisy nampilaza ny polisy ka nidina tany ifotony ireo mpitandro filaminana teo an-toerana.
Napetraka tany amin’ny vata fampangatsiahana ny alina fa ny sabotsy maraina vao nojerena, raha ny resaka manokana tamin’ny lehiben’ny kaompanian’ny zandarin’i Manakara. Niantso ireo teknisianin’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono tao amin’ny faritra ka fantatra fa feno poizina mahafaty ity “Fano” ity. Soa ihany fa tsy nisy sahy mbola nihinana ireo efa nandrasa. Nony fantany izany dia samy nanary izany.
Hatramin’ny fotoana nanoratana ny vaovao, tsy nisy fitarainana fanapoizinana ara-tsakafo. Ny mpitandro filaminana koa nitety ny tsena sao nisy namongatra indray ilay biby nalevina. Voalaza moa fa rehefa vita ny taratasy avy amin’ny prefe nalevina ary norarahana asidra teo iamason’ny mpitazana mba ilazana fa mahafaty tanteraka io sokadranomasina nalevin’ny miaramila io.